Maro silica sare leh ayaa ah nooc ka mid ah maadada fiber-ka-imanka ah ee heerkulka sarreeya. Sababtoo ah sifooyinka kiimikada ee xasilloon, iska caabbinta heerkulka sare iyo iska caabbinta soo kabashada, alaabooyinka ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa aerospace, metallurgy, chem ...
Aluminiumka aluminium ee dabka u adkaysta dabka ayaa sidoo kale loogu yeedhi karaa fiber dhoobada iyo aluminium silicate fiber. Faytarka dhoobada ayaa ah wakiilka ugu weyn ee fiber-ka u adkaysta macnaha guud, kaas oo ah magaca guud ee alumina, silica, aluminium ...
Sida si sax ah loogu doorto maro dabka ka hortag u qalma
Maro dab-damis ahi waa nooc ka mid ah maro ka samaysan waxyaabo aan guban karin, kaas oo si gaar ah loogu adeegsado ka hortagga dabka iyo ololka ilaaliya shaqada gaarka ah. Xaaladaha dalab ee kaladuwan ayaa leh shuruudo kala duwan oo ah dharka aan dabka laga shidan karin. Ma ...
Maxay yihiin waxyaabaha saameeya qiimaha marada dabka ka caagan
Maro dab-damis ahi waa nooc ka mid ah wax soo saarka leh heerkulka korantada oo sarreeya, kaas oo aqbali kara culeyska korantada oo sarreeya, waxaana laga dhigi karaa gacmo-gashiga dharka lagu dahaadho, iwm. Sidoo kale wuxuu saameyn ku yeelanayaa waxyeellada dhuumaha leh ballaarinta kuleylka iyo con ...
Maxay yihiin faa'iidooyinka dharka silikoonka ah
Cajaladda silikoonku waa nooc ka mid ah aashitada iyo alkaliska u adkaysta iyo xirashada u adkaysta alaabooyinka, oo inta badan loo isticmaalo dhirta kiimikada ah iyo kuwa soo saaraya iyo warshadaha kale, waa wax soo saar u adkeysan kara cadaadiska sarreeya. Marka, maxay yihiin faa'iidooyinka waxqabadka wanaagsan ee sheygan? Tuubada caagga ah oo ka samaysan silikoon maro ...